Abasemapulazini nosizi lweminyaka – Bayede News
Abasemapulazini nosizi lweminyaka
Abantu “abangena amapulazi” abaholelwa imali engaphilisa umuntu yize sekunomthetho olawula ukuholelwa kwezisebenzi zasemapulazini.
Posted on 11 November 2019 11 November 2019 by nguMenzi Jele
UHulumeni waseNingizimu Afrika, usungule isithangami sokulalela imiphakathi ngodaba olubucayi noseluhluphe abantu abaningi lokubuyiselwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.
Isithangami lesi besilawulwa yiKhomishini ebijutshelwe ukuthi isebenze nezinhlaka zomthetho. Le Khomishini ihambele izindawo ezahlukene, zonke zakuleli lizwe ihlangana nabantu ababethi bafuna ubuye umhlaba wokhokho babo nalabo abathi lingawa licoshwe izinkukhu, awukho umhlaba abazowudedela bona. Lesi sithangami besikhona kusukela eminyakeni emibili eyadlule.
Okufike kwahlaluka kulezi zithangami, isihluku nokuhlunyezwa kwabantu ababehlala emapulazini ngesikhathi bexoshwa kuwo besuswa ngendluzula. Laba bantu bebexoshwa emapulazini ngoba ipulazi lelo selithengwe ngumnikazi omusha. Umnikazi omusha lowo kwakungenzeka afike nezisebenzi zakhe, noma ashaye imithetho emisha engahambisani nabantu abafice kulelo pulazi.
Ingqinamba abahlali basemapulazini ababhekana nayo uma sekufike umnikazi omusha epulazini ukuguqulwa kwempilo abebeyiphila. Bebekalelwa inani lezinkomo, izimbuzi, izimvu, okufanele bakufuye. Umcebo wemiphakathi yasemakhaya nasemapulazini iseziyabeni, lapho imfuyo yabo igcinwa khona.
Inzima impilo emapulazini. Abanye abantu bakhona bahamba amabanga amade beyogibela amabhasi noma izimoto ezibathuthela edolobheni eliseduze.
Indaba yokufunda nezikole emapulazini insumansumane uqobo lwayo. Abantu kulezi zithangami bebetshela iKhomishini ukuthi izikole zasemapulazini zigcina kuGrade 7. Uma usuqede lelo banga uphoqolekile ukuthi usiyeke isikole uyosebenza kulona lelo pulazi. Uma ungahambisani nalokho, uyaphoqwa ukuthi uthathe imithwalo yakho uhambe unomphelo epulazini.
Abavunyelwe ukungcwaba emapulazini abanye abantu abahlala kuwo. Noma sebehlale iminyaka eminingi, kuyefana. Umndeni wakwaSithole waseMadadeni, eNewcastle, enyakatho yeKwaZulu-Natal, wavinjwa ngumlungu wepulazi ngenkathi ethi uyolanda umkhulu wekhaya owangcwatshwa epulazini eNormadien, eDannhauser. Udaba lwaze lwaxazululwa yiNkantolo, ikhehla lagcina lilandiwe ngehlahla lomlahlankosi, ngemuva komzukuzuku.
Uhlelo “lokungena amapulazi” kwaphikiswa ngisho nayiKhomishini Yamalungelo Abantu, kodwa akukho mahluko. UMnu uSipho Shabangu, wakhuluma ngesikhathi lesi isithangami sihleli eJozini, esifundeni saseMkhanyakude ngonyaka odlule.
Ngesikhathi ekhuluma uShabangu, wavusa usizi nentukuthelo kwabaningi ababethamele isithangami. Kwesinye isikhathi kwakuba nzima ukuchaza isimo ababhekana naso bengumndeni ngesikhathi besuswa epulazini. Ngesikhathi ekukhuluma kwakufanele ukuba athule, anikezwe isikhathi sokukhala, anikwe namanzi okuphuza, aphephethwe ngoba wayejuluka.
UShabangu wayechaza ngosizi umndeni wakubo owabhekana nalo besuswa epulazini eNgoje, eVryheid, enyakatho neKZN. Uthi kwakungowe-1975, kusehlobo, ilanga libalele likhipha umkhovu etsheni. Uthi kubo babezalwa ngumnumzane, indoda eyayihlonishwa epulazini nasendaweni ngoba yayifuyile, ikhomba ngophakathi.
UShabangu uthi kwafika umndeni wamaBhunu owabatshela ukuthi uHulumeni ukhiphe umyalelo wokuthi abantu abahlala kulelo pulazi abahambe bayokhonza “kwanokhesheni” (ezindaweni eziphethwe ngaMakhosi nezinduna). Baphume baphele epulazini.
Umndeni wakwaShabangu, uthi wawunemfuyo ebalelwa ema-200. Kuleyo mfuyo kwakukhona izinkomo, izimvu, izimbuzi, izingulube, namahhashi. Abazange bakuqoqe lokhu bahambe nakho ngoba bahamba sebekhonjwa ngezibhamu. Iloli lase limile egcekeni lilindele ukubakhipha, libalaxaze ngaphandle kwepulazi, bazibonele ukuthi bazobhekaphi nezwe.
Umndeni wawaShabangu wagcina usufudukele eSwazini, usuphila njengezimpabanga, ngoba wawusulahlekelwe yikho konke owawunakho. Iminye imindeni yayisuswa emapulazini ngesidlozane ibekwe ezindaweni eziwugwadule, ezingenamanzi, ezinesihlabathi nomgubane nezinguzanguza zamatshe. Imfuyo yayifa ubugingqigingqi ngoba ayiyijwayele indawo ewugwadule, engenamanzi.
Abantu “abangena amapulazi” abaholelwa imali engaphilisa umuntu yize sekunomthetho iLabour Relations Act, olawula ukuholelwa kwezisebenzi zasemapulazini. Uma izisebenzi zasemapulazini zifuna leli holo kubanikazi bamapulazi ezibasebenzelayo, zikhonjwa indlela, zitshelwe ukuthi ayikho imali.
Nokudla ezikunikwa ngabanikazi bamapulazi akugculisi, akunamsoco. Kwamanye amapulazi izisebenzi ezihlala ngaphakathi zithengelwa imishini yokugaya ummbila nesaka leklabishi ezizokudla inyanga yonke. Inyama idliwa ngoKhisimuzi kuplela, mhla u”Khandalimeva” (u-van der Merwe) ebahlabele inkomo.
Abantu bebekusho kugcwale umlomo bethi bafuna ukubuyiselwa umhlaba wokhokho babo. Abalimi abaMhlophe bathi nabo umhlaba abalima noma abafuya kuwo bawuthenga. Bathi mhlawumbe bayisizukulwane sesine noma sesithathu kusuka kulabo abasusa abantu kulawo mapulazi.
Abalimi abatshale amahlathi akhiqiza izingodo, zigaywe zakhe iphepha bakhala ngokufadalala kwebhizinisi lapho selokhu izwakele indaba yokuthi kunemihlaba okufanele yephucwe bona.
Omunye wabalimi ukhala ngokuthi abatshalizimali abavela eGermany ebebefuna ukuthenga amapulazi azodala amathauba emisebenzi eVryheid bancamele ukubuyela emuva ngoba banovalo.
Amapulazi abuyiselwe kubantu abasuswa kuwo ngesikhathi sobandlululo yilawo angasayenzi inzuzo. Ngesikhathi luqala uhlelo lokubuyisela abantu imihlaba ngeminyaka we-1996, uMnyango Wezomhlaba Kuzwelonke ubuwathenga lawo mapulazi kwabaMhlophe bese ubuyiselwa kubantu.
Posted in Ezomhlaba, iBayede Kuleli SontoTagged featured opinion